ग्लाइसीन प्रोपिओनिल-एल-कार्निटाइन (GPLC) के हो
ग्लाइसीन प्रोपिओनिल-एल-कार्निटाइन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन र एमिनो एसिड ग्लाइसिनको आणविक बन्धन प्रकारलाई बुझाउँछ। यो परिवारमा कार्निटाइनमा एकै रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ र क्रिएटिभिनको स्थापनामा आवश्यक छ। ग्लाइसीन प्रोपियोनिल-एल-कार्निटाइन (GPLC) एक antioxidant को रूपमा कार्य गर्दछ, र यसले फ्रि रेडिकल बिरूद्ध प्रभावशाली लडाईका साथै लिपिड पेरोक्साइडेशनमा सुरक्षा दिन्छ।
यसबाहेक, यसले मिटोकोन्ड्रियामा लामो श्रृंखलाको फ्याटी एसिड प्रसारण सक्षम गरेर उर्जाको निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यसले फोहोर पदार्थ उन्मूलन गर्न मद्दत गर्दछ - कार्निटाइनले शरीरको हृदय रोग र मधुमेहबाट बचाउन सहयोग गर्दछ। GPLC मांसपेशी वृद्धि को उत्प्रेरणा को एक समारोह मानिन्छ र प्रदर्शन व्यायाम वृद्धि गर्दछ। पूरकलाई अन्य पूरकहरूको साथ पनि लिन सकिन्छ, उदाहरणका लागि, प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन एल-आर्जिनिन र नियासिन, जसले पुरुषहरूमा इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ईडी) सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि अत्यधिक मात्रा नलिनको लागि तपाइँको डाक्टरबाट सहि खुराक लिनुहोस्, जसले गम्भीर साइड इफेक्टको परिणाम दिन्छ।
प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन ब्रान्ड समावेश; --प्रोपेनोयलोक्सी-- (ट्राइमेथिलाजान्यूमिल) ब्यूटोनेट, ग्लाइसिन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन (423152-20-9), L-carnitine propionyl, PLC, LPC, र Glycine propionyl-L-Carnitine Hydrochloride। को आहार पूरक तपाईंको स्थानमा निर्भर गर्दै विभिन्न ब्रान्ड नामहरूमा बेचिन्छ। जे होस्, त्यो तपाईंको चिन्तामा हुनुहुँदैन; चिकित्सकहरू यसलाई खरीद गर्न मा मार्गदर्शन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
यो पूरक बिभिन्न अनलाईन स्टोरहरूमा उपलब्ध छ जहाँ तपाईं यसलाई कुनै समस्याहरू बिना आयात गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, propionyl-l-carnitine वालमार्ट सकेसम्म कम समय भित्र उद्धार गर्दछ। तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेले फरक पार्दैन, आफ्नो स्मार्टफोन वा कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहोस् र प्रोपिओनेल-एल-कार्निटिन वालमार्ट अर्डर गर्नुहोस्। तपाईको अन्तिम निर्णय लिनु अघि उपलब्ध ग्लासिन प्रोपियोनेल विक्रेताहरूमा अनुसन्धान गर्न सल्लाह दिइन्छ। प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन रेडडिट समीक्षाहरू पढ्नुहोस् कसरी विक्रेताहरू वा पूरकहरू संचालन गर्दछन्। ग्राहकहरू सँधै पूरकको बारेमा उनीहरूको इमानदार राय व्यक्त गर्दछन्, जुन तपाईंलाई सर्वश्रेष्ठ विक्रेता छनौट गर्न मद्दत गर्दछ। तपाइँको डाक्टर पनि कहाँ र कसरी एक गुणवत्ता पूरक प्राप्त गर्न मा तपाइँलाई तपाइँको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत मा मार्गदर्शन गर्न सबै भन्दा राम्रो व्यक्ति हुनेछ।
ग्लाइसीन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन बनाम एल-कार्निटाइन
जीपीसीएललाई कार्निटाइन प्रोपियोनाइल एस्टर भनेर चिनिन्छ जसले ग्लाइसिनको अर्को घटक समावेश गर्दछ। टिश्युहरू एस्टेरेजको एन्जाइमहरूको कारण, ग्लाइसीन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन टेस्टोस्टेरोनले प्रोड्रगको भूमिका खेल्नु पर्छ र ग्लाइसिन, कार्निटाइन, साथै मानव शरीरमा प्रोपियोनिक एसिडको परिणाम हुन्छ। ग्लाइसीन प्रोपियोनिल-एल-कार्निटाइन र एल-कार्निटाइन कुनै खास आयाममा फरक हुन्छन्। ती दुबै ऊर्जाको उत्पादनमा पनि मद्दत गर्छन् मांसपेशियों को विकास। ग्लाइसीन प्रोपियोनिल-एल-कार्निटिन जाँचले तपाईंको शरीरलाई हृदय रोग जस्ता रोगबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ।
यसको विपरित, एल-कार्निटाइन सामान्यतया खुट्टाको दुखाई र हृदयका रोगहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। L-Carnitine एक रसायन हो जबकि ग्लाइसीन प्रोपिओनिल-एल-कार्निटाईन (423152२20१9२-२०)) जाँच आणविक हुन्छ। छोटकरीमा, ग्लाइसीन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन टेस्टोस्टेरोनले रोगसँग लड्छ जबकि एल-कार्निटाइनले रोगहरू निको पार्छ।
ग्लाइसीन प्रोपियोनिल-एल-कार्निटाइन प्रभावहरू
निम्न हो ग्लाइसिन प्रोपियोनेल L कार्निटाइन फाइदाहरू:
ऊर्जा आपूर्ति. प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाईनले शरीरलाई उर्जा उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। शरीरको अन्य प्रक्रियाहरू बीच यो उचित मुटुको काम, मांसपेशीहरूको आवाश्यकताका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो शरीरमा उच्च रक्त स्रावको लागि पनि जिम्मेवार छ।
कम टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा उपचार गर्दै. बुढ्यौलीले पुरुषमा कम टेस्टोस्टेरोन ल्याउन सक्छ। प्रोसिओनेल-एल-कार्निटाइन छ महिनाको लागि एसिटिल-एल-कार्निटाइनको साथ संचार कमको लागि एक उपचार हो यौन प्रदर्शन, डिप्रेसन, र थोरै पुरुषहरूमा थकान। यो संयोजन कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन जस्तै काम गर्दछ।
एन्जाइना वा छाती दुखाई. प्रोपोयोनिल-एल-कार्निटिनलाई मुखले एन्जाइना भएकाहरूलाई टाढा पुग्न मद्दत गर्दछ। केहि मानिसहरुमा, यसले छातीको दुखाइको आवृत्तिलाई कम गर्न सक्छ।
यसले पुरानो इस्कीमिक हृदय रोगको उपचार गर्दछ. जब तपाईं शिरामा प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन इंजेक्स गर्नुहुन्छ, यसले कोरोनरी हृदय रोग भएका व्यक्तिहरूमा मुटुको पम्प राम्रोसँग मद्दत गर्दछ।
कन्जेस्टिभ मुटुको असफलता (CHF). प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन मध्यम वा हल्का सीएचएफ भएका व्यक्तिहरूको लागि सक्रिय प्रोड्रग हो। यसले तिनीहरूको हृदयले प्रदर्शन गर्दछ र लामो दूरीको लागि हिंड्न मद्दत गर्दछ।
ग्लाइसीन प्रोपियोनेल एल कार्निटाइन र इरेक्टाइल डिसफंक्शन. तपाईंको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हार्मोनहरू बढाउँदै, यो पूरकले स्वचालित रूपमा इरेक्टाइल समस्याहरूको समाधान गर्दछ साथै पुरुषहरूमा सेक्स ड्राइभ पनि बढाउँदछ।
ईडी र मधुमेह भएका पुरुषहरूमा राम्रो नतिजाको लागि प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन अक्सर भियग्रा (सिल्डेनाफिल) सँग मिसाइन्छ। यसबाहेक, प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन समावेश गरेको विशिष्ट सामग्रीले यौन प्रदर्शनलाई बढावा दिन सक्छ।
परिधीय संवहनी बिरामीहरु (खराब सर्कुलेशन). परिधीय रोगहरूले हिड्ने बेलामा खुट्टाहरूमा नसहरू वा दुखाइको सूजन हुन सक्छ; एक बिरामी अवरोध क्लेडिकेसन भनिन्छ। प्रोयोनिल-एल-कार्निटाइनको सुई ईन्जेसनहरू वा सिधा इन्जेसनले खुट्टा दुखाइ अनुभव गरिरहेका मानिसहरूलाई लामो दूरीसम्म हिंड्न मद्दत गर्दछ।
पेयरोनी रोग (यसले लि tiss्ग टिश्यूहरूलाई कडा पार्छ).Propionyl-L-carnitine सँगै भेरापशील भनिने औषधिले यौन प्रदर्शनलाई बढावा दिन्छ, अवस्थालाई बिग्रनबाट रोक्छ। संयोजन मौखिक वा इंजेक्सन मार्फत लिन सकिन्छ। Peyronie रोग शल्यक्रिया हुन सक्छ यदि समावेश छैन भने। तसर्थ, प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन उद्धारको लागि आउँदछ।
आन्द्रा रोग (अल्सरेटिव कोलाइटिस)। प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन अल्सरेटिव कोलाइटिस भएका बिरामीहरूमा पनि लक्षणहरूलाई कम गर्नका लागि उपयोगी छ जुन केही औषधीहरूको अधीनमा छ। यसले लक्षणहरू हटाउन सक्छ।
ग्लाइसीन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन अनुसन्धान र नतीजा
क्रोहन रोग (आंत्र रोग)प्राथमिक अनुसन्धानले प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइनको प्रयोगले क्रोहनको बिरामीमा हुने लक्षणहरूलाई अत्यन्त कम गर्दछ भनेर देखाउँदछ।
पुरानो थकान सिन्ड्रोम (CFS).अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइनले सीएफएस बिरामीहरूको लागि सामान्य थकान सुधार गर्दछ। चाखलाग्दो कुरा के भने, यदि एसेटिल-एल-कार्निटाईन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइनसँग मिसियो भने परिणाम पूरक या त पूरै प्रयोग नगरी कम प्रभावकारी हुन्छ।
व्यायाम क्षमता। इनारले साइकलिंग शक्ति, कडा शारीरिक व्यायाम सहन क्षमता बढाउँदछ। यद्यपि, उचित लिनुहोस् ग्लाइसिन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन खुराक। यस परिशिष्टको ओभरडोज गर्नाले ग्लाइसीन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटिन एचसीएल साइड इफेक्ट हुन सक्छ, जुन उल्टाउन महँगो हुन सक्छ।
ग्लाइसिन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइनमा कस्ता खाद्य पदार्थहरू रिच छन्?
ग्लाइसिन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन मुख्यत: यसमा फेला पर्दछ:
गाढा पत्ते साग,
Glycine प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन कसरी लिने
प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाईन पूरकको रूपमा बेचिन्छ। तपाईं यसलाई आफ्नो स्थानीय स्टोर वा फार्मेसीमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। खेलाडीहरूले यसलाई लिनबाट ठूलो फाइदा लिन सक्दछ किनकि यसले शरीरलाई इष्टतम मांसपेशी समारोह कायम राख्न मद्दत गर्दछ र सेल झिल्लीमा ऊर्जा प्रवाह बढाउँछ। यहाँ सिफारिस गरिएको ग्लाइसिन प्रोपिओनिल-एल-कार्निटाईन (423152-20-9) खुराक रकम वैज्ञानिक अनुसन्धान द्वारा समर्थित।
रक्त नली विकारहरूको उपचार गर्न: 500००-२००० मिलीग्राम प्रोपियोनेल-एल-कार्निटिन दिनमा दुई पटक लिनुहोस्।
CHF (कन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर), एनजाइना वा छाती दुखाईको उपचार गर्न; Mg०० मिलीग्राम प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन दिनमा तीन पटक लिनुहोस्।
वृद्धावस्थामा टेस्टोस्टेरोनलाई बढावा दिन: दिनको दुई ग्राम प्रोपोनिल-एल-कार्निटाइन र दुई ग्राम एसिटिल-एल-कार्निटाइन लिनुहोस्।
ग्लाइसीन प्रोपियोनेल एल कार्निटाइन र इरेक्टाइल डिसफंक्शन: २ ग्रामको प्रोपोनिल-एल-कार्निटाइन दैनिक daily० मिलीग्रामको साथ मिश्रित लिनुहोस्। दुई पटक साप्ताहिक दिइन्छ। प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन एल-आर्जिनिन र नियासिनको एक विशेष संयोजनले तपाईंको सेक्स ड्राइवलाई बढावा दिन्छ। जे होस्, खुराक २m० मिलीग्राम एफआईआर प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन र नियासिनको लागि २०mg हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, तपाईं प्रति दिन २ ar०० मिलीग्राम आर्जिनिनको साथ पूरक पनि लिन सक्नुहुनेछ।
पेयरोनी रोगको लागि: भेरापामिल भनिने औषधीको इन्जेक्सनको साथ दिनको २ ग्राम प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन।
अल्सरेटिभ कोलाइटिसको लागि: प्रोपोयोनाल-एल-कार्निटाइन को दिनको दुई पटक 0.5-1 ग्राम।
तपाई l-carnitine, र Cialis लाई पनि जोड्नुहोस्, तर राम्रो अनुभवको लागि मेडिकल प्रोफेशनलबाट सही डोज प्राप्त गर्नुहोस्।
मुटु रोगहरु र रक्त वाहिका विकारहरु को लागी: स्वास्थ्य विशेषज्ञहरु प्रोपियानिल - L-carnitine इंजेक्शन, IV भनिन्छ को संचालन।
ग्लाइसीन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन साइड इफेक्टहरू र सुरक्षा
प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन धेरै व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षित हुन्छ जब मौखिक रूपमा लिइन्छ वा एक पेशेवर डाक्टर द्वारा शिरामा इंजेक्सन गरिन्छ। यसले पखाला, पेट अपसेट, पेट दुखाइ, बान्ता, ढाड दुख्ने, र छाती संक्रमण हुन सक्छ। थप रूपमा, यसले सास, मूत्र, वा पसिनाको दुर्गन्ध लिन सक्छ।
गर्भवती र स्तनपान गराउने प्रयोगकर्ताहरू: स्तनपान गराउने वा गर्भवती आमाहरूका लागि प्रोपियोनेल-एल-कार्निटिनको प्रयोगको बारेमा थोरै मात्र ज्ञात छ। सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र प्रयोगबाट बच्नुहोस्।
"Underactive थाइरोइड" (हाइपोथायरायडिज्म): प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइनले हाइपोथायरायडिज्मलाई नराम्रो बनाउन सक्छ वा थाइरोइड हार्मोनको उपचार कम प्रभावकारी बनाउन सक्छ। ड्रगमा रहेको केमिकल, अर्थात्, एल-कार्निटाइनले थाइरोइड हर्मोनमा हस्तक्षेप गर्दछ। प्रोपोनिल-एल-कार्निटिनबाट बच्न उत्तम हुन्छ यदि तपाईलाई हाइपोथायरायडिजम छ भने।
दौरा: दौराको ईतिहासका साथ केहि व्यक्तिले एल-कार्निटाइन प्रयोग गरेपछि गम्भीरता र दौरामा परेको रिपोर्ट गरेका छन्। प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाईनसँग यस्तो हुने सम्भावना धेरै छ किनकि यससँग मिल्दो रसायन रहेको छ।
अन्य औषधीको साथ GPLC को अन्तर्क्रिया
सुरक्षित पक्षमा हुन, तपाइँ सुरू गर्नु अघि तपाइँको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस् GPLC लिदै। यदि तपाईं Acenocoumarol (सिन्ट्रोम) लिईरहनु भएको छ भने, तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई पनि सम्मिलित गर्नुपर्दछ किनकि यसले हल्का अन्तरक्रिया पनि गर्दछ किनकि यसले रगतको थक्का सुस्त बनाउँछ जबकि GPLC ले सिन्ट्रोम प्रभाव बढाउन सक्छ।
वारफेरिन (कुमाडिन) अर्को औषधी हो जुन तपाईं ग्लाइसिन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन सप्लीमेन्टसँग सँगै लैजान सक्नुहुन्छ। यद्यपि, सँधै यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई आफ्नो औषधिबाट सहि खुराक पाउनुहुन्छ। खुराक उपचार अन्तर्गतको स्थितिमा फरक पर्न सक्छ।
प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाईन पूरक किन्न कहाँ
कुनै पनि अन्य मेडिकल उत्पादनहरू जस्तै, तपाईं ग्लाइसिन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन सप्लीमेन्टहरू विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरू वा शारीरिक मेडिकल ल्याबहरूमा पनि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, चुनौती भनेको सही डिलर छनौट गर्न आउँदछ जुन तपाईंलाई गुणस्त उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ। त्यहाँ धेरै छन् ग्लाइसिन प्रोपियोनिल-एल-कार्निटाइन पाउडर विक्रेता, दुबै शारीरिक र अनलाइन। जे होस्, त्यसले तपाईंलाई डराउँदैन, तपाईंलाई चाहिने कुरा भनेको आफ्नो समय निकाल्नु र उपलब्ध ग्लाइसिन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन पाउडर डिलरहरूको बारेमा केही अनुसन्धान गर्नु हो।
तपाईंसँग ग्लाइसिन प्रोपियानिल एल-कार्निटाइन थोक पाउडर किन्नको स्वतन्त्रता छ वा तपाईंको प्रयोगको लागि मात्र पर्याप्त छ। याद गर्नुहोस्, जहिले पनि अधिक मात्रामा ग्लाइसिन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन सुविधाहरूको आनन्द लिन तपाईको मेडिकल प्रोफेशनलबाट सहि डोज प्राप्त गर्न। प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन रेडडिट्रिभ्युहरू बिभिन्न प्रयोगकर्ता अनुभवहरूको सिंहावलोकन प्राप्त गर्न विचार गर्नुहोस्। तपाईं अन्य पूरकहरू बीच, उही विक्रेताबाट l कार्निटाइन र सियालिस खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन ब्रान्ड एक स्थानबाट अर्कोमा फरक हुन्छ, तर यो अझै समान समशिष्ट हो। अर्डर गर्नु अघि तपाईंको डाक्टरसँग यकिन गर्नुहोस्।
यस द्वारा अनुच्छेद:
डा लि L्ग
सह-संस्थापक, कम्पनीको मुख्य प्रशासन नेतृत्व; पीएचडी फूडन विश्वविद्यालयबाट जैविक रसायनमा प्राप्त गरे। औषधीय रसायनको जैविक संश्लेषण क्षेत्रमा नौ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव। कम्बिनेटोर रसायन विज्ञान, औषधीय रसायन विज्ञान र कस्टम संश्लेषण र परियोजना व्यवस्थापनमा रिच अनुभव।
Stasi, एमए, साइकोली, एमजी, आर्कुरी, G., मट्टेरा, GG, लोम्बार्डो, K., मार्सेलिनी, एम, ... र बोर्सिनी, एफ (२०१०)। प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाईनले पोस्टस्केमिक रक्त प्रवाह रिकभरी र धमनीकोपनात्मक रिवास्क्युलाइरेसन सुधार गर्दछ र एन्डोथेलियल NADPH-oxidase 2010 – मध्यस्थता सुपरआक्साइड उत्पादन घटाउँछ। एटेरियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, र संवहनी जीवविज्ञान, 30(3), 426-435।
जियानफ्रिली, डी।, लौरेटा, आर।, डि डोटो, सी, ग्र्याजियाडियो, सी। पोज्जा, सी।, डी लारीचौडी, जे।, ... र लेन्जी, ए (२०१२)। यौन चिकित्सामा प्रोपियोनेल ‐ l ‐ कार्निटाइन, एल gin आर्जिनिन र नियासिन: निर्माण कार्यमा न्युट्रस्यूटिकल दृष्टिकोण। Andrologia, 44, 600-604।
Flayyih, NK (२०१ 2015) L-carnitine को प्रभाव गर्भवती चूहोंलाई प्रशासित महिला अफस्प्रिंग्सको प्रजनन कार्यक्षमतामा। विज्ञान र चिकित्साको लागि Wassit को जर्नल, 8(1), 97-104।
१. ग्लाइसिन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइन (GPLC) के हो?
२.ग्लाइसिन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन बनाम एल-कार्निटाइन
G.ग्लाइसिन प्रोपिओनिल-एल-कार्निटाइन प्रभावहरू
G.ग्लाइसिन प्रोपिओनिल-एल-कार्निटाइन अनुसन्धान र परिणाम
W.के ग्लाइसिन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइनमा कस्ता खानाहरू धनी हुन्छन्?
H. कसरी ग्लाइसीन प्रोपियोनिल-एल-कार्निटाइन लिने
G.ग्लाइसिन प्रोपिओनिल-एल-कार्निटाइन साइड इफेक्टहरू र सुरक्षा
G. GPLC को अन्य औषधीसँग अन्तर्क्रिया
W। जहाँ प्रोपिओनेल-एल-कार्निटाईन पूरक किन्नको लागि
नोभेम्बर 15, 2020
के Palmitoylethanolamide (PEA) वजन घटाउने लाभ छ?